OTK- M1 500W Yakajairika Yemagetsi Urban Cargo Bike, China OTK- M1 500W Yese Yemagetsi Magetsi Cargo Bike Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Kutakura Kunakidzwa (Changzhou) Ebike Co., LTD
OTK- M1 500W Yakajairika Yemagetsi Magetsi Cargo Bike
Motokari: 48V-500W Bhatiri: 48V 11.6AH Ratidza: LCD
Max Kubva: 25km / h Range: 50-70km Mutero: 5-6h
Chiedza: LED Mutoro: 200kg Kurema: 43kg
Iwe unoda here bhasikoro rekutakura rekufambisa kana zvinangwa zvekushandisa? Iwe unofunga kuva nechimwe chinhu icho zvakasikwa chakagadzirirwa kuunza kutakura kana vana vako? Mabhasikoro emagetsi sarudzo yakasarudzika yekutakura kuti iwe uende kunzvimbo yako nekukurumidza kupfuura kushandisa mota mune yakazara-yakazara traffic.
Iyo OTKARGO M1 ibhasikoro remagetsi rakagadzirirwa nhumbi, iyo vhezheni vhezheni ine simba, ine zvirinani zvinhu uye mota, kuti iwe ugone kuitasva chero kupi pasina kunetseka nezvekurasa renji. Iyo 500W hub mota inotakura bhasikoro inovakwa ne 48V 11.6Ah Lithium-Ion Bhatiri iyo yakagadzirirwa kuremerwa kwakanyanya uye kwenguva refu kukwira. 7-kumhanya Shimano drivetrain uye mechina disc disc mabhureki anopa kugadzikana uye maneuverability.
Hunhu hunonyanya kushanda pabhasikoro ndiyo chinodhonzwa-chinobatsira kwekusagona kutyaira kugona. Iyo ine nhanho inosvika makumi mashanu. Panyaya yemhando uye spec, ndiyo yakanakisa uye inokwanisika yemagetsi utility cargo bhasikoro iwe yaunogona kutenga. Iyo yakanaka yemagetsi bhasikoro remhuri pamwe nemagetsi kuendesa bhasikoro kumakambani.
GENERAL SANGANO REHEMA DIMENSION
Max.kumhanya 25 km / h (EU) motokari 500W urefu 234cm
dungwerungwe Nezve 50-70KMS kuratidza LCD upamhi 42cm
Max load 200KGS bhatiri 48V 11.6AH urefu 90cm
Charge nguva 5-6H
Mberi kwe Wheel 20``
Shure Wheel 26``